Umgaqo-nkqubo wethu uhlala iintsuku ezingama-30. Ukuba iintsuku ezingama-30 zidlulile ukususela ekuthengeni kwakho, ngelishwa, asinakukunika mbuyiselo okanye utshintshiselwano
Asinikezeli ngembuyekezo yokuhanjiswa okungafakwanga.
Ukuze uvumeleke ukubuyisela, umcimbi wakho makangasetyenziswanga kwaye kwimeko efanayo ukuba uyifumene. Kufuneka kwakhona kubekwe kwiphakheji yangaphambili.
Iintlobo ezininzi zeempahla ziyaxolelwa ukuba zingabuyiselwa. Izinto ezinokutsha ezifana nokutya, iintyatyambo, amaphephandaba okanye amaphephancwadi azinakubuyiselwa. Siphinde samkele iimveliso ezithandanayo okanye iimpahla ezinobungozi, izinto ezinobungozi, okanye i-liquids ezinokutsha okanye i-gesi.
Ukugqiba ukubuyela kwakho, sifuna irisidi okanye ubungqina bokuthenga.
Nceda ungathumeli ukuthenga kwakho kumenzi wemveliso.
Asamkeli nayiphi na into engekho kwimeko yayo yoqobo eyonakeleyo okanye iindawo ezilahlekileyo ngezizathu ezingekho ngenxa yempazamo yethu okanye nayiphi na into ebuyisiweyo ngaphezulu kweentsuku ezingama-30 emva kokuziswa
Imbuyiselo (xa ikhona)
Ukuba uvunyiwe, ngoko imali yakho iya kuqhutyelwa, kwaye i-credit izakusetyenziswa ngokuzenzekelayo kwikhadi lakho lekredithi okanye indlela yokuhlawula yokuqala, kwisithuba esithile seentsuku.
Ukubuyiswa kwexesha elide okanye elingekhoyo (ukuba likhona)
Ukuba ukwenzile konke oku kwaye awukafumani imali yakho yokubuyiselwa imali, nceda uqhagamshelane nathi [imeyile ikhuselwe]
Izinto zokuthengisa (xa zikhona)
Kuphela zizinto ezinamaxabiso aqhelekileyo ezinokubuyiselwa, ngelishwa, izinto ezithengiswayo azinakubuyiselwa.
Ukutshintshiselana (ukuba kusebenza)
Sifaka izinto kuphela endaweni yokuba zinesiphene okanye zonakele. Ukuba ufuna ukuyitshintshela kwinto enye, sithumele i-imeyile kuyo [imeyile ikhuselwe] ngemiyalelo eyongezelelweyo.
Ukuba le nto imakwe njengesipho xa kuthengwa kwaye ithunyelwa ngqo kuwe, uya kufumana isipho sesikweletu ngenani lokubuyela kwakho. Emva kokufumana into ebuyisiwe, isatifikethi sesipho siya kuthunyelwa kuwe.
Ukuba loo nto ayimakwanga njengesipho xa kuthengwa, okanye umnikezeli wesipho wayenomyalelo wokuthunyelwa kubo ukukunika kamva, siya kuthumela imali kumniki-mnikelo kwaye uya kufumanisa ngokubuya kwakho.
Ukubuyisa imveliso yakho, thumela i-imeyile ku [imeyile ikhuselwe] ngemiyalelo eyongezelelweyo.
Uya kuba noxanduva lokuhlawula iindleko zakho zokuthumela ukubuyisela into yakho. Iindleko zokuthumela azibuyiswa. Ukuba ufumana imali yokubuyisela imali, iindleko zokuthumela umrhumo ziya kuncitshiswa kwimbuyekezo yakho.
Ngokuxhomekeka apho uhlala khona, ixesha elithathayo ukuba umkhiqizo wakho utshintshwe ukuze ufikelele kuwe, iyahluka.
Ukuba uthumela into ngaphezulu kwe-EUR 75, kuya kufuneka ucinge ngokusebenzisa inkonzo yokuhambisa okanye yokuthenga i-inshurensi. Asikuqinisekisi ukuba siza kuyifumana into yakho ebuyisiweyo.